Tantaran-drazan’ny Iñupiaq Nomena Aina Tamin’ny Alàlan’ny Lalao An-dahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2014 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, русский, Español, Català, polski, Deutsch, Français, Italiano, English
Nomena aina vao tamin'ny endrika lalao an-dahatsary azo lalaovina amin'ny solosaina na ireo fitaovana malaza hafa azo ampiasaina ilay tantaran-drazan'ireo Iñupiaq antsoina hoe Kunuuksaayuka, notantarain'i Robert Nasruk Cleveland ary noraketina tao anatin'ilay boky “Stories of the Black River People” (Tantaran'ireo Olona Tao Amin'ny Renirano Mainty). Mitohy mahazo dera noho ilay fomba tsy manam-paharoa nampidirana ireo vondrom-piarahamonin'ireo Indiana Alaskan tamin'ny fandrafetana manontolo azy ilay lalao vaovao antsoina hoe Never Alone (Kisima Inŋitchuŋa – Tsy Irery Mandrakizay ).
Tantaraina amin'ny fiteny Iñupiat language ary asiana dikanteny Anglisy misoratra ery ambany, ilay lalao dia mitanisa ny tantaran’ny ankizivavy iray, Nuna, sy ilay amboahaolo namany, izay manainga mba hizaha sy hamantatra ny anton'ilay tafiotran-dranomandry mahery namely ny vondrom-piarahamonina misy azy. Na dia ankizilahy aza no endrika niaingàna tany amboalohany tao anatin'ilay tantara notantarain'i Cleveland, nangataka fahazoan-dàlana tamin'i Minnie Gray, zanaka vavin'i Cleveland, ireo mpamokatra ny lalao mba hanao io fanovàna io.
Fandraisana andraikitra niarahana no niantombohan'ny tetikasa, nataon'i Cook Inlet Tribal Council, sy ny E-Line Media ary ny Upper One Games, izay mpamokatra lalao an-dahatsary voalohany indrindra mba indizena no tompony. Noraketin'ireo mpamorona azy ao amin'ny bilaogy natao ho an'ilay lalao ireo dingana narahana, hatramin'ny lahatsary nalaina tany ambadiky ny sehatra (etsy ambony) ahitàna ny fomba nataon'ireo zokiolona, ireo tanora, ary ireo mpahay momba ny teny, feno rehareha tokoa samy nandray anjara tamin'ny famokarana ilay lalao.
Mitohy tonga hatrany ny fanamarihana, ary manoratra i Roy Boney ao amin'ny Native Peoples blog (Bilaogin'ireo Indiana teratany) fa “mihoatra lavitra noho ny lalao an-dahatsary tsotra fotsiny ny Never Alone. Fiainana ara-kolontsaina iray izy io, nofonosina ao anaty taokanto iray mahafinaritra sy voasaina tsara”.